Gulf Dunhu Rinobuda Kufamba uye Yekutengesa Musika kusvika Soar na2028
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Gulf Dunhu Rinobuda Kufamba uye Yekutengesa Musika kusvika Soar na2028
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kuwait Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo yekufambisa uye yekushambadzira indasitiri munyika dzeGCC yakaona kukura kukuru mumakore mashoma apfuura.
Chirevo chitsva chinotarisisa kubuda kwekushanya uye misika yekushanya yeSaudi Arabia, UAE, Qatar neKuwait,
Saudi Arabia musika inofungidzirwa kuti inowana mari inosvika $ 27,030.19 mamirioni na2028.
UAE musika inofungidzirwa kusvika $ 30,484.37 mamirioni na2028.
Sekureva kwenhamba yekufambisa uye yekushanya indasitiri, mugore ra2017, mari yemumwe neumwe wekushanya kubva kuGulf Cooperation Council (GCC) nyika yaive 6.5 zvakapetwa kupfuura avhareji yepasirese.
Kune rimwe divi, sekureva kwehuwandu hwakaitwa neWorld Bank, mari yepasirese yekushanya mu Saudhi Arabhiya, Qatar, neKuwait, mugore ra2019 rakanyorwa kuve USD 16.415 bhiriyoni, USD 12.528 bhiriyoni, uye USD 17.131 bhiriyoni zvakateerana. Kupfuurirazve, izvi zvinoshandiswa muUnited Arab Emirates (UAE) zvakakura kubva pamadhora mazana masere emadhora emadhora emadhora gumi nemasere muna18.004 kusvika pamadhora makumi matatu nematatu emadhora makumi matatu nematatu.
Chirevo chitsva chinopa zvirevo zvakadzama zvemusika wekufamba uye wekushanya weSaudi Arabia, UAE, Qatar, neKuwait. Chirevo ichi chinotarisa pane azvino musika maitiro, mikana, kukura kwevatyairi, uye zvinodzivisa zvine chekuita nekukura kwemusika mukati menguva ya2019-2028.
Iyo yekufambisa uye yekushambadzira indasitiri munyika dzeGCC yakaona kukura kukuru mumakore mashoma apfuura. Uku kukura kunogona kunyanya kunzi kune kuri kukura kwemari kwevanhu mune mamwe marudzi, pamwe nekukwira kuri kudikanwa pakati pevanhu kwekufamba kunoenderana nemabhizinesi, zororo, kana zvinangwa zvechitendero kune nyika dzakasiyana pasi rese.
Mune mamwe manhamba ne Bhidhiyo renyika, iyo yakazara mari yenyika (GNI) pamunhu muSaudi Arabia, United Arab Emirates, uye Qatar yakakura kubva pamadhora 19,990, USD 39,290, uye madhora 56,920 zvakateerana mugore ra2017 kusvika paUS $ 22,840, USD 43,470, uye USD 61,180 zvichiteerana mugore 2019. Uyezve, muKuwait, izvi zvakawedzera kubva pamadhora 31,400 mu2017 kusvika kumaUSD 36,290 muna2019.
Iyo GCC inobuda kunze kwekushanya uye mushamba wekushanya unofungidzirwa kukura neakakosha CAGR panguva yekufungidzira, kureva, 2021 - 2028. Musika muSaudi Arabia unofungidzirwa kuti unounganidza mari yeUS $ 27,030.19 mamirioni na2028, kubva kuUS $ 15,100.83 mamirioni mu iro gore 2019 nekukura kuCAGR ye18.21% panguva yekufungidzira. Kupfuurirazve, musika muUAE, iyo yakawana kukosha kweUS $ 19,448.49 mamirioni mu2019, iri kutarisirwa kuwedzera kusvika kuUS $ 30,484.37 mamirioni na2028, nekukura kuCAGR ye18.73% panguva yekufungidzira. Zvakare, iyo Qatar inobuda yekushanya uye yekushanya musika inofungidzirwa kukura neCAGR ye18.66% panguva yekufungidzira uyezve kuwana mari yeUS $ 3989.34 mamirioni na2021. Musika kuKuwait, kune rumwe rutivi, unotarisirwa kuunza mari yakawanda yeUS $ 17,392.50 mamirioni na2028, nekukura kuCAGR ye18.40% panguva yekufungidzira.
Japan kupedza COVID-19 mamiriro ekukurumidzira vhiki ino
Praslin Tour Guides Govana Nyowani Kunetseka ne Tourism ...